अभिनेत्री नेहाकी बहिनि आयशाको बो-ल्ड अवतार, फ्यान भन्छन, 'पाइन्ट लगाउन बिर्सेको हो?'
अभिनेत्री नेहाकी बहिनि आयशाको बो-ल्ड अवतार, फ्यान भन्छन, ‘पाइन्ट लगाउन बिर्सेको हो?’
बलिउड कलाकार आयशा शर्मा हालै बो-ल्ड अवतारमा देखिएको छिन् । अभिनेत्रीले यी शुन्दर तथा बो-ल्ड तस्बिरको कारण सबैको मन जित्न सफल भएको छिन् । तर अहिले धरै फ्यानहरु नजर उनको टांगमा गएको छ। अहिले चर्चा भइरहेको छ कि के आयशाले पाइन्ट लगाउन भुलेकी हुन् त?
बलिउड अभिनेत्री नेहा शर्माको बहिनि आयशा शर्माले हालै गरेको उनको फोटो शुटले सामाजिक सञ्जालमा तहल्का मच्चाईरहेको छिन् । तस्बिरमा आयशा निकै शुन्दर देखिएको छिन् । तर यस फोटोलाइ राम्रोसँग हेर्नुभयो भने तपाइलाइ लाग्नेछ कि उनले पाइन्ट लगाउन बिर्सिसकेकी छिन्।
आयशा उनको यो ताज तस्बिरमा आफ्नो टेन्ड लेग्स देखाइरहेको छिन् । अहिले उनको फ्यानहरु उनको तस्बिर प्रति मोहित भएको छन् ।
आयशा शर्माले उनको इन्स्टाग्राममा यस्ता धेरै तस्बिर सार्वजनिक गरेको छिन् । आयशा तस्बिरमा सेतो शर्ट र सेतै स्कर्ट लगाएर पोज दिइरहेको छिन् । अहिले उनको यी तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमा तिब्र रुपमा भाइरल भैरहेको छ ।
फोटो स्रोत: आयशा शर्माको इन्स्टाग्राम
प्रकाशित : बिहिबार, साउन ०७, २०७८१३:५०
सवारीसाधनमा भाडा समायोजनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए यातायात व्यवसायी !